रक्तदाता कसरी बढाउने ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जमिन सम्पत्ति हो कि आधार
भूमि व्यवस्थापनप्रति कुनै पनि तहको सरकारले सक्रियता नदेखाएकाले जनपहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
जेष्ठ ३१, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — मधेसतिर आमाले आफ्नो सानो बच्चालाई खुवाउन अनेक थरीले फकाउँछिन्, रिझाउँछिन् र पुल्पुलाउँछिन् । यसका निम्ति अनेक थरीका आहान, गीत पनि सुनाउँछिन् । त्यस्तै एउटा आहान छ, ‘जब खाएब बडका–बडका कौर, तब पाएब दुनियाँ मे ठौर ।’ अर्थात जब ठूलठूलो गाँस खान्छौं, अनिमात्र दुनियाँमा ठाउँ पाउँछौं ।
यस्ता पंक्तिहरू भन्दै थालीमा रहेका परिकारलाई परेवा, हाँस, भँगेरा, मयूर, सुगा आदि नाम दिँंदै अनेक हिस्सामा गाँसलाई छुट्याइन्छ । यसरी बनावटी नाम दिइएको कौर बनाएर खुवाउँदा बच्चाले छिटछिटो खान्छ । आमाले भनिरहेकी हुन्छिन्, ‘यो कौर (गाँस) खाएनौ भने यो चरो त उडिहाल्छ ।’ र बच्चाहरू पनि आमाकै लयमा यति छिटछिटो खाइदिन्छन् कि त्यो चरोले उड्ने मौका पनि पाउँदैनन् । अनि आमाले अथ्र्याउँछिन्, तिमी नखाएको भए उडिहाल्थ्यो नि † र जब बच्चाले बनावटी चरालाई सिध्याउँछ, आमाले आत्मिक आनन्दको अनुभव गर्छिन् । सिरहातिर भेटिएकी एक दलित महिला भन्दै थिइन्, ‘हाम्रो थाल रित्तो हुन्छ, अनि कसरी फकाउने बच्चाहरूलाई ?’
मधेसमा भूमिहीन र गरिबको स्थिति झन् कमजोर हुँदै गएको छ । भूमि व्यवस्थापन एवं भूमि वितरणबाट यस्तो स्थितिलाई फेर्न सकिन्थ्यो । जमिन दिनुभन्दा पनि आधुनिक अर्थ व्यवस्थाले साना खेतीलाई नोक्सानी पुर्‍याएको छ । उर्वर वा आवासको जग्गा विस्तारै ‘रियल इस्टेट’मा बदलिएको छ । सहरतिर मात्र होइन, सुदूर देहाततिर पनि जग्गाको भाउ अकासिँदै गएको छ । जग्गाको उत्पादनभन्दा त्यसको कृत्रिम भाउ वृद्धिले जग्गा कारोबार एउटा निश्चित समूहको कब्जामा पुग्दै गएको छ । भूूमि व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउनमा सबभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो राजनीतिक वर्गबाटै छ ।
स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मको चुनावमा भूमाफियाले यात लगानी गरेका छन् वा आफै प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन् । भूमि व्यवस्थापनप्रति कुनै पनि तहको सरकारले सक्रियता देखाएको छैन । निर्वाचन पश्चात एउटा फराकिलो विमर्शका आधारमा यस दिशामा केही तदारुकता देखाउन सकिन्थ्यो । तर चारैतिर उदासीनता र उपेक्षाको अवस्था छ । त्यसैले भूमि व्यवस्थापनका लागि जनपहल आवश्यक हुँदै गएको छ ।
मधेसमा भूमि समस्या नयाँ–नयाँ स्वरुपमा देखापर्दै गएको छ । विगतका कतिपय प्रयत्नका बाबजुद पनि भूमिहीनको संख्या बढ्दै गएको छ । मधेसमा दुई थरीका भूमिहीन छन् । एउटा, यहाँको उर्वर जग्गामा आँखा लगाएर बाहिरबाट बसाइँ–सराइ गर्दै जग्गा ओगट्न आइपुगेकाहरू । दोस्रो, यहीं पुख्र्यौली थातथलो भएकाहरू जसको सवाल कहिले पनि राजनीतिको मूलधारमा विमर्शको विषय बनेन । विकसित अर्थ व्यवस्थामा जमिन आजीविका र खेतीको मात्र ठाउँ रहेन । यसले निवेश वा रियल इस्टेटको संरचना प्राप्त गरिसकेको छ । यो सोचका कारणले भूमि एक प्रकारको निवेश हुँदै गएको छ ।
मधेसमा भूमिहीनहरू कोही सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेका छन् भने कोहीले कुनै व्यक्तिको नम्बरी जग्गामा आश्रय पाएका छन् । जंगल पँmडानी गरेर अराजक तरिकाले बसाइँ–सराइ गर्नेहरू माओवादी द्वन्द्वको अवधिमा बेपत्ता बढे । जंगलकै सेरोफेरो भएर ठूला आयोजनाहरू आउने भएपछि यी गैरकानुनी बसोबास गरेका क्षेत्रमा जग्गाको भाउ चुलिएको छ । जसले गर्दा सही र नक्कली भूमिहीन को हुन् भनेर छुट्याउन झन् जटिल भएको छ । नक्कली भूमिहीनहरू उर्वर जग्गा ओगटेर रजाइँ गर्न पाउँदा उनीहरू बरु तुलनात्मक रूपमा बढी संगठित छन् र मुखरित छन् । मधेसका वास्तविक भूमिहीनहरूका मुद्दा बाहिर आउनसकेकै छैन । स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा केही गम्भीरता देखाउँला भनेर कतिपय कोणबाट अपेक्षा गरिएको थियो । तर उनीहरू दृष्टिहीन भएका छन् ।
भूमि अधिकारको आन्दोलनबारे मधेसमा भनिन्छ, ‘नौ दिन चले अडाई कोस’ अर्थात यात्रा अवधि लामो तर हिँडाइ थोरै । मधेसको सामाजिक सोपानमा मुन्तिर रहेका जातिहरूमा आउँदै गरेको राजनीतिक उभारले सामाजको आपसी समीकरण र सन्तुलन फेरिन थालेको छ । सामन्ती कृषि संरचनाको प्रभावबाट मुक्त हुन कृषि मजदुरहरूको मौसमी पलायन मधेसको ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाको अनिवार्य पक्ष बनिसकेको छ । पलायन भएकाहरू फर्केर आएपछि खेती गर्ने नयाँ तरिका, प्रविधि र थोरै पुँजीसमेत गाउँ भित्रिएको छ । यस प्रकारले यस्ता ‘छोटा पुँजी’का खरिददारहरूको व्यापक बजार बन्दै गर्दा अन्य अनुपस्थित खेतीवालले आफ्नो जग्गा यी नयाँ किसानहरूका बीच हस्तान्तरण गर्दै गएका छन् ।
वस्तुस्थिति यति गत्यात्मक छ कि मधेसमा भूस्वामित्वको अवस्था कस्तो छ, ठूला जग्गा कुन आवरणमा कसले ओगटेको छ भन्दा पनि यो स्वीकार गर्नु मनासिव हँुदै गएको छ कि वास्तविक भूमिहीन जनताको भूमि पाउने चाहनालाई मत्थर पार्दा यसले कृषितन्त्रलाई नै धरापमा पारिदिन सक्छ । भूमि प्राप्तिलाई जीवनको अत्यावश्यक आधारभूत विषय मानिनुपर्छ । त्यसैले मानव अधिकारका दृष्टिकोणले पनि भूमि प्राप्त हुनैपर्ने अवधारणा बाक्लिँदै गएको छ । संघीय सरकारको पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्यमा पनि यो सवालले तगारो हाल्ने निश्चित छ । कारण के हो भने भूमि हुनेसँंग उत्पादन र आम्दानीको स्रोत हुन्छ । त्यसैले उसले शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय आदिमा पहुँच पाउँछन् । त्योभन्दा पनि राज्यको नागरिकका रूपमा स्वामित्व पाउने नागरिकता प्रमाणपत्रको हक पाउँछन् ।
सिरहाकी दलित महिलाले भनेको सवाल भोजनको अधिकारसँंग गाँसिएको छ । यो आम नागरिकको अधिकारसँंग पनि जोडिएको छ । गुणस्तरीय भोजन पाउने अधिकार एउटा नागरिकमा हुनैपर्छ । आयातित अन्नमा रसायनको प्रयोग भएको प्रशस्त सुनिन्छ । त्यसले गर्दा पनि भएको जग्गामा उत्पादकत्व बढाउन प्रयत्न हुनुपर्छ । तर भई के राखेको छ भने ‘अपरेसन कब्जा’ अन्तर्गत जग्गा कारोबारीले ठूला परियोजना र राजधानी वा केन्द्रका लागि लबिङ सुरु गरेका छन् । प्रदेश २ मा रहेको चारकोसे झाडी पातलिँदै गएको छ । जंगलमाथिको प्रहार रोकिएको छैन । यसले गर्दा जंगल छेउछाउ बसोबास गर्ने भूमिहीनहरू जोखिममा त छँदैछन्, भूमि सुधारमार्फत जमिन प्राप्त गर्ने कृषकहरूले पनि भूमिबाट फाइदा लिने अवस्था रहँदैन ।
अहिले पनि गुठीसँंग प्रशस्त जमिन छ । पछिल्लो संक्रमणको अवधिमा त्यसका ठूलो हिस्सा ‘लिज’मा लिनेहरू हौसिएका छन् । अर्कोतिर सुकुमवासी एउटा मानसिकता र पेसा भएको आक्षेप छ । सुकुम्वासीका नाममा जंगल पँmडानी गर्ने, नदी कब्जा गर्ने, आफूखुसी बसोबास गर्ने र जोखिममा पर्ने समस्या पनि देखिएको छ । अब त स्थानीय सरकार आइसक्यो । उसले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीलाई प्रयोग गरेर भूमिहीनताको सही तथ्यांकको खोजी र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्न सक्छ । कतिपय पालिकाले भूमि समिति गठन गरेका छन् । भूमिको खण्डीकरण रोकिएको छैन । त्यसबारे स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारसंँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्छन् र भूमि व्यवस्थापनबारे प्रभावकारी साहसी निर्णय लिन सक्छन् । भूमिलाई अलग–अलग समस्यामा टेकेर होइन, संरचनात्मक हिसाबले नै समग्र सुधारको दृष्टि चाहिएको छ ।
अनुपस्थित भूस्वामित्व कसरी नियन्त्रण गर्ने ? कृषिको आधुनिकीकरण भनेको के हो ? कृषि सम्बन्धी पारम्परिक ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने ? कृषकको सम्मान पुन:स्थापना कसरी गर्ने ? भूउत्पादकत्व बढाउने कार्यविधि के हुनसक्छ ? तराईमा खेतीयोग्य जमिन साँघुरिँदै गएकामा कसैको विवाद छैन । त्यसैगरी भूमिहीनता बढ्दै गएको छ । जबसम्म स्थानीयदेखि संघीय सरकारसम्मले जमिनलाई संसाधनभन्दा पनि विरासत मान्दैनन्, तबसम्म समस्या टुङ्गो लाग्दैन । विगतमा जग्गाको हदबन्दी घटाउने प्रस्ताव जति आँटिलो र सामयिक देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष त्यतिकै अपत्यारिलो र कमजोर देखिएको छ । त्यसैगरी नेपालको भूमि अधिकार आन्दोलन पनि समावेशी हुनसकेको छैन । भूमि अधिकारका नाममा भूमिको दोहनप्रति आँखा चिम्लिन सकिँदैन । बहुतहको संरचनाका बाबजुद पनि जमिनमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणले तहगत रूपमा शक्ति र सत्ताको नियन्त्रणमा सन्तुलन छैन । एउटा हिस्सा यसको उपयोगबाट अलग–थलग पारिएको छ ।
भूमि मान्छेको बाँच्ने आधार हो । भूमि व्यवस्थापनको प्रयत्न अन्य मुलुकमा पनि भएको छ । तर हामीकहाँ यो निहित स्वार्थ प्रेरित हुँदै आएको छ । त्यसैले यो सवालमा जहिले पनि ध्रुवीकरण देखिएको छ । अन्न स्वावलम्बन बिना आर्थिक वृद्धिदर उँभो लाग्न सक्दैन । त्यसका लागि पनि भूमि व्यवस्थापनबारे राष्ट्रिय समझदारी आवश्यक हुँदै गएको छ । कृषि उत्पादन बढाउने र वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि भूमि व्यवस्थापनसँंग जोडिनुपर्छ ।
चुनावका बेला केन्द्र र प्रदेश दुइटैका प्रत्यासी पार्टी र पात्रले भूमिहीनका सवाल उठाएका थिए । अब आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई सोधौं, के गर्दै हो ? अन्नमा आत्मनिर्भर हुन भूमिलाई जीविकाको आधार मानौं । खेती कर्ममा लाग्न चाहनेलाई त्यसमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गरौं । उर्वर जग्गा अधिकतम सदुपयोग गरौं । केवल ठूलठूला नारा र परियोजनाले केही सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पुर्‍याए पनि समाजमा ठूलो खाडल पनि खडा गर्दै जानेछन् । समस्या समाधानोन्मुख अपेक्षा भनेको जमिनलाई जीविकाको आधार मान्नु हो ।